Qolka hufan ee ku yaal Bursaray si loogu oggolaado rakaabku inay sugaan Qabow! | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaQolka hufan ee ku yaal Bursaray si loogu oggolaado rakaabku inay sugaan Qabow!
15 / 11 / 2019 16 Bursa, Ahmet Emin Yılmaz, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY, qorayaasha
saldhigyada bursaray sugitaanka qolka hufan
BursarayRakaabku waxay Sugaan Qabow Qolka hufan! ; Waxaa laga yaabaa in emin aad u muhiim ah qaar ka mid ah arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha dibnaha loo arki karaa daraasad.
Xagaagii ayaanu iskaga tagnay maalin kasta 300 kun oo rakaab ah gaarista rikoorka gaadiidka, bartilmaameedka 500 kun oo rakaab ah maalintii u qorsheeyaan maalgelintooda si ku habboon Ayaa u duulaya Bursaray marka la eego nolol maalmeedka gudahood Dhumeen waxaad u baahan tahay a codsiga su’aal.
Waxaan badanaa u adeegsanaa fikradaheena iyo talooyinkeena khibradeena ku saabsan arrimaha gaadiidka. Injineerka madaniga ah M. Tözün Bingöl Diray.
Tunelada banaanka Bursaray saldhigyada dhexe ee wadooyinka waaweyn iyo sare ee dabaqa wadada. Maaddaama deegaankooda uu sidoo kale furan yahay, meelaha rakaabka ee xarumaha laga raaco hawo hawadu dareemaa in ka badan oo ku filan.
In kastoo ...
Dib u soo kabashada hawada xagaaga hawo qaboojiye hawlo, laakiin jiilaalka marka la eego rakaabka oo sugaya xagaaga waqtiyo adag sababa.
Sababtoo ah ...
Rabshadaha sii kordhaya ee dabaysha ayaa si xun u saameeya sugitaanka qabow.
Waayeellada, carruurta iyo bukaanka Sugid dhibaato leh imaatinka.
Bursaray 's Burulaş Waa xaalad dhib badan ugu yaraan si loo xaliyo fudud laakiin wax ku ool ah hal diyaarin oo joogsi ah.
Kestel in line Saldhigga 'Esenevler / Hacivat Station'Iyadoo codsigu bilaabmay rubucii ugu horreeyay ee aagga sugitaanka rakaabka ayaa loo xiray hab daahfuran.
Sugida rakaabka labadaba u soo dhowaada xarunta Bursaray gawaarida oo kormeera deegaanka qol hufan wax soo saar.
Goobaha Bursaray 'ka hor tagida diidmada qabow iyo dabaylaha xilliga qaboobaha. caafimaadka rakaabka Suuqa hore, muuqaalku ma xumayn karo cabirka lagu sameeyay samaynta sidaas.
Khabiirka Gaadiidka Bingöl sidoo kale codsi faa iido yeelan doontaa In u maleeyay.
Sistem Waa wax faa'iido leh in nidaamka laga hirgeliyo dhammaan saldhigyada sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah, taas oo aan wax u dhimeyn astaamaha saldhigga mana saameynayso muuqaalka magaalada ” dedi. (Ahmet Emin Yılmaz - dhacdo)
Hagaha Safarka Bursaray
Mersin Chambers iyo Madaxwayne Soodhawrka ka hadlaan Dhibaatooyinka Magaalada
Kadir Topbas oo ah mashruuc waali ah 'wax aan dhammeystir lahayn' ayaa la joojiyay
Manisa, Kooxaha ayaa ka shaqeynaya inay waddooyinka xiraan
BursaRay Saacadaha Duulimaadka Sannadka Cusub
Gubashada 2.5 oo leh Kestel transformer Burs
Bursaray waxaa la siiyaa casharro laga bilaabo abaabulka Christmas
Fasaxa Kirismaska ​​ee Yurub wuxuu ka tagay Bursaray isagoon badalin,…
Habka Kaliya ee Loo Isticmaalo Bursaray Functionally, Kent Kent
Bixinta amniga ee Bursaray
Minibuses-ka iyo dadka kale ee isbarbar dhigaya Bursaray…
Kordhinta socdaalka ayaa imanaya Bursa